महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा लाभांश क्षमता कति? - Business Awaj
Home Development bank महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा लाभांश क्षमता कति?
महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा लाभांश क्षमता कति?
महालक्ष्मी विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को चौथो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले यस त्रैमासमा ७३ करोड २९ लख खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवदीमा ४२ करोड ८५ लाख आर्जन गरेको थियो । तुलनाको अवधिमा खुद नाफा ७१.०२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
बैंकले ३८ अर्ब ६० करोड निक्षेप संकलन गरेर ३० अर्ब १० करोड कर्जा विस्तार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३६ अर्ब ९७ लाख निक्षेप संकलन गरेर २९ अर्ब ४३ करोड कर्जा विस्तार गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १ अर्ब ५६ करोड रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५५ करोड रहेको थियो । त्यसैगरी सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब २ करोड रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६० करोड ९९ लाख रहेको थियो ।
खुद ब्याज आम्दानी सामान्य बढेपनि नेट ट्रेडिङ्ग आम्दानी र अन्य सञ्चालन आम्दानी बढेका कारण बैंकको खुद नाफा बढेको हो। कम्पनीको हाल सम्मको वितरण योग्य नाफा ५६ करोड ३८ लाख रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १६ प्रतिशत रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी ३ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । जगेडा कोषमा १ अर्ब ५९ करोड छ भने कम्पनीको संचित नाफा ५६ करोड ७६ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको निष्कृय कर्जा अनुपात बढेर ३.३२ प्रतिशत रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा २.८० प्रतिशत रहेको थियो ।
कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी रु १३.९५ बाट बढेर रु २१.९३ रहेको छ भने नेटवर्थ रु १६४.७५ रहेको छ । त्यसैगरी मुल्य आम्दानी अनुपात २०.२९ गुणा रहेको छ ।
Previous articleनेप्सेमा ८० हजार कित्ता बोनस सेयर सुचिकृत
Next articleलाभांश वितरण गर्न लक्ष्मी उन्नति कोषले तोक्यो बुक क्लोज